FANODIKODINAM-BOLA TAO AMIN’NY ORINASANA TERATANY INDIANA TAO NOSY BE: Niharan’ny sazy avy hatrany ilay lehilahy nivadi-pitokisana – Madatopinfo
Notanterahana ny alatsinainy 21 desambra lasa teo teny amin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly (PAC) ny raharaha fanodikodinam-bola sy fananan’ireo teratany indiana mpampiasa vola ao amin’ny orinasa Pearls Tourism Limited sy ny Pearls Tourism Malagasy. « Taorian’ny famoahana ny didim-pitsarana izay nivoaka tamin’io andro io ihany dia voaheloka higadra 2 taona an-tranomaizina sazy mihatra sy didy famonjana avy hatrany ny lehilahy iray antsoina hoe Marson Rafalarivo », hoy ny Avocat à la Cour Maître Brichard Saotsoa, mpisolovava ireo orinasa roa ireo nandritra ny fanambarana nataony teto Antananarivo ny talata 22 desambra lasa teo.. Handoa lamandy mitentina 50 tapitrisa ariary sy handoa onitra 2 miliara ariary amin’ireo orinasa voalaza anarana etsy ambony ihany koa i Marson R. araka ny didim-pitsarana hatrany. Tonga nanatrika ny fitsarana teny amin’ny PAC moa ny solontenan’ny orinasa Pearls Tourism Limited sy ny Pearls Tourism Malagasy, Dhaliwal Harnam Singh.
Tsiahivina fa tamin’ny volana jona 2015 no notendren’ireo teratany indiana tompona orinasa ao Dzamandzar Nosy Be hisahana ny fikarakarana ny Golf tao an-toerana ireo i Marson Rafalarivo. Noho ny fifampitokisana teo amin’ity roa tonta, nomena alalana manokana i Marson R, hiandraikitra ny kaontim-bola eny amin’ny banky izay misoratra amin’ny anaran’ny orinasa i Marson R. ny 23 desambra 2015. « Nanomboka teo anefa dia tsy nanome tatitra ara-bola mihitsy i Marson R. na dia efa nisy aza ny taratasy sy mailaka nisesisesy nalefa taminy ka izay no nahatonga izao fametraham-pitoriana izao », hoy hatrany ny mpisolovava. Manoloana ny didim-pitsarana izay nivoaka moa dia nanambara ireto mpampiasa vola vahiny ireto fa afa-po tamin’izany. Na dia teo aza izany disadisa izany, ny orinasa Pearls Tourism Limited sy ny Pearls Tourism Malagasy ihany koa dia nilaza ny fahavononany hanohy hatrany ny fampiasam-bola eto Madagasikara.